लोकसेवा आयोग स्थापनाको ६७ औँ वर्ष प्रवेश गरेको छ । आयोगको यो सफल र गरिमामय यात्राका क्रममा मुलुकमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए । आयोगको यात्रा भने जारी रह्यो । जसको परिणाम आज सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने निष्पक्ष, धरोहरका रुपमा आयोगले परिचय बनाएको छ । स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनपछि मुलुक पूर्ण रुपमा सङ्घीय संरचनामा रुपान्तरण हुनेछ । नयाँ बन्ने संरचनामा कर्मचारी समायोजनको विषय त्यत्तिकै पेचिलो छ । संविधानले निजामती सेवामा मात्र सीमित लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारलाई बृहत् बनाइदिएको छ । यसै मेसोमा केन्द्रित रही आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग गोरखापत्रका पत्रकार करुण अर्याल र शम्भु प्रसाईले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
 लोकसेवा आयोग ६६ वर्ष पूरा गरेर ६७ वर्ष प्रवेश गर्दै गर्दा यसको संस्थागत विकास कहाँ पुगेको छ ?
आयोगको जन्म जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको बहालीसँगै २००८ सालमा भएको थियो । स्थापनाकालमा सिंहदरबारको दुई वटा कोठाबाट आयोग सञ्चालन थियो । दुई वटा कोठामा खाँदिएर काम गर्नुपर्दा कामको भार र काम गर्ने राम्रो
वातावरण नभएकाले कर्मचारी बिरामी परेका थिए । त्यस्तै सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि आयोगको कार्यालय विशालनगरमा सरेपछि आयोगका पदाधिकारी टेम्पो चढेर वा पैदल हिँडेर आयोगमा जानुपर्ने अवस्था थियो । स्रोत साधनविहीनको त्यो अवस्थामा आयोगले आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई कहिलै कमजोर ठानेन । निष्पक्ष परीक्षा सञ्चालन गर्ने र योग्य उम्मेदवारलाई सरकारी सेवामा सिफारिस गर्ने काममा आयोग अनवरत रूपमा लागि नै रह्यो । निष्पक्षता र योग्यता प्रणाली स्थापित गराउने सवालमा लोकसेवा आयोग पर्याय नै बन्यो । साधन स्रोतको अभावको त्यो समयलाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेसम्ममा आयोगको संस्थागत विकास धेरै अगाडि बढिसकेको छ । हामीसँग पर्याप्त साधन स्रोत भइसकेको छ । भवन, सवारी साधन आदि यो अवस्थालाई हेर्दा लोकसेवाको संस्थागत विकासमा उल्लेख्य उपलब्धि भएको मान्नुपर्छ ।
यहाँको नेतृत्व पाएपछि आयोगले के कस्ता उपलब्धि हासिल ग¥यो ?
(डबल चेकिड) को व्यवस्था गर्न थालिएको छ । दुई जनाले उत्तरपुस्तीका परीक्षण गर्ने काम सहसचिव र उपसचिवको पेपर जाँचमा लागू गरिएको छ । तेस्रो सहसचिवको पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिएको छ । यसलाई घोकन्तेभन्दा सक्षमताको नक्साङ्कन मापन गर्न पाठ्यक्रम बनाइएको छ । फरक खालका सक्षमताको खोजी गरिएको छ । यसमा नैनिक मूल्य भन्ने अलग्गै पेपर बनाएका छौँ । चौथो शाखा अधिकृतभन्दा माथिका पदको परीक्षाका कापी आयोगमै बसेर जाँच्ने व्यवस्था गरिएको छ । पाँचौँँ यातायातले नछोएका दुर्गम जिल्ला डोल्पा र हुम्लामै परीक्षा केन्द्र स्थापना गरियो । जुन २००८ सालदेखि हालसम्म हुन सकेको थिएन र छैटौँ परीक्षार्थीका धेरै चाप हुने लहान र वीरगञ्जमा पनि परीक्षा केन्द्र राखिएको छ, यी सुधारले आयोगका हरेक कामलाई चुस्त दुरुस्त एवम् छिटो छरितो बनाउन सहयोग गरेको छ ।
आयोगका भावी योजना के छन् ? जसले आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी एवम् भूमिकालाई थप मजबुद बनाउँछ ।
आगामी असार १ गतेदेखि हामी मोबाइल एप्स प्रयोगमा ल्याउँदैछाँै । यो एप्स प्रयोगमा आएपछि सेवाग्राहीले लोकसेवासँग सम्बन्धित सबै सूचना यो एप्सबाट सेकेन्डभरमा थाहा पाउन सक्छ । अझ परीक्षार्थीले त आफ्नो परीक्षा सेन्टर कहाँ प¥यो भन्नेसम्म जानकारी एप्सबाट पाउँछ । दोस्रो हामी सिनियर तहका पद विद्यमान परीक्षण प्रविधिभन्दा विल्कुलै पृथक् र नयाँ अभ्यासको रूपमा परीक्षण विविलाई अझ वैज्ञानिक बनाउन एसेस्मेष्ट सेन्टर मेथेडोलोजी (एसिएम) यो अत्याधुनिक परीक्षण विधि लागू गर्ने योजनामा लागेका छौँ । एसेस्मेण्ट सेन्टरको अवधारणा भनेको के हो भने हामी पेपर पेन्सीलका आधारमा ज्ञानको जाँच गर्ने पुरातन विधिभन्दा पृथक् ढङ्गले उम्मेदवारका भित्रि ल्याकत पहिचान गर्ने विधि हो । जुन विधिबाट छानिएका उम्मेदवारले कार्यक्षेत्रमा गएर कसरी काम सम्पादन गर्छ भन्ने कुराको निक्र्यौल परीक्षण प्रक्रियामा पत्ता लगाउन सकिन्छ । उसको निर्णय क्षमता कस्तो छ, सञ्चार क्षमता कस्तो छ, सेवाग्राहीसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भने कुराको यो प्रविधिबाट थाहा पाउन सकिन्छ । अहिलेको समयमा आएर पनि हामीले गाथा गाएर मात्र पुग्दैन, युगअनुसार नयाँ–नयाँ परीक्षण विधि अपनाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ निकै महँगो प्रविधि भए पनि हामी यसको अभ्यासमा छिर्ने भएका हौँ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको छ, यस्तो अवस्थामा आयोगको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
समायोजन विधेयक भन्नुभयो के कस्तो व्यवस्था छ, त्यो विधेयकमा ?
एक वर्षसम्म नयाँ पदपूर्ति तथा आन्तरिक बढुवासम्मका कार्य नगर्दा यसले नयाँ पुस्तालाई र सेवारत कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई असर गर्दैन ?
सङ्घीयतामा लोकसेवा आयोगको स्वरूप कस्तो हुन्छ ?
नेपालको संविधानले आयोगलाई दुई तहमा राख्यो एउटा केन्द्रको लोकसेवा आयोग र अर्काे प्रदेशसेवा आयोग । केन्द्रकोलाई संवैधानिक भूमिका दिइयो । यसका नियुक्ति प्रक्रियादेखि अन्य यसका काम कर्तव्य अधिकार संविधानमा नै उल्लेख गरिएको एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा यो संस्थालाई राखियो भने प्रदेश स्तरमा चाहिँ प्रदेश कानुनअनुसार छुट्टै आयोग बन्ने व्यवस्था गरियो । कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि प्रदेशमा गठन गरिने आयोग अहिलेको लोकसेवाको मातहतमा रहने होइन कि त्यो छुट्टै स्वायत्त रहने गरी व्यवस्था गरियो । प्रदेश आयोगको गठन र काम कर्तव्यसम्बन्धी आधार र मापदण्ड सङ्घीय कानुनले तोक्ने भन्ने व्यवस्था गरियो ।
प्रदेश आयोगका काम कर्तव्य अधिकार प्रदेश कानुनले बनाउने हो भने निष्पक्ष होला भनेर कसरी भन्न सकिएला ?
कानुनद्वारा गठन हुँदैमा निष्पक्ष हुँदैन भनेर कसरी भन्ने ?
निष्पक्ष हुँदैन भन्ने त आधार छन् । यहाँहरूलाई थाहा होला ऐनद्वारा पदपूर्ति समिति बनेका संस्थानमा, स्थानीय निकायमा, विश्वविद्यालयमा खोई निष्पक्षता भएको ? किन ती संस्थाले लिने परीक्षामा प्रश्न उठे आखिर ती संस्था पनि त कानुनद्वारा नै गठित थिए । निष्पक्ष हुनलाई जुन किसिमको स्वायत्तता जरुरी हुन्छ त्यो सम्भव हँुदैन यस्ता संस्थाबाट । किनकि यिनीहरूका सञ्चालक तथा पदपूर्तिका पदाधिकारी संस्था प्रमुख वा आफूलाई नियुक्ति दिने राजनीतिक दल वा मन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । जनताप्रति होइन ।
संविधानले आयोगको क्षेत्राधिकारलाई बृहत् बनाइदिएको छ । संविधान बन्नु अगाडि यहाँले आयोगको क्षेत्रात्रिकार बढाइनुपर्छ भनेर माग गर्नुभएको थियो कि विधायकले नै स्वविवेकले क्षेत्राधिकार बढाइदिएको हो ?
विगतमा करिब ८० हजार कर्मचारीको पदपूर्ति तथा बढुवा सिफारिसमा सीमित लोकसेवा आयोगको विद्यमान जनशक्ति र भौतिक संरचनाभित्र रहेर कसरी यतिको ठूलो जिम्मेवारी पूरा गरिरहनुभएको छ ?